Ethnic Nationalities Voice တိုင်းရင်းသားအသံ: အီဂျစ်စစ်တပ်ကပြည်သူဘက်ရပ်တည်မလား?မူဘာရက်အောက်ကျွန်းခံမလား?
တစ်ပတ်ကြာပြီးဖြစ်သောမူဘာရက်အာဏာရှင်ဖြုတ်ချရန်ဆန္ဒပြနေသောအီဂျစ်ပြည်သူများအနေနဲ.တနင်္ဂနွေနေ.တွင်ကြာဖြတ်ခေါင်းဆောင်ကို ရွေးချယ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်၊နိုဘဲလ်ဆုရှင်လည်းဖြစ်၊ကုလသမဂ္ဂနယူကလီယားစုံစမ်းစစ်ဆေးအကြီးအကဲဟောင်းလည်းဖြစ်တဲ့မိုဟာမက် အဲလ်ဘရာဒီးကိုဆန္ဒပြပြည်သူတွေကခေါင်းဆောင်အဖြစ်တင်လိုက်ပါပြီ၊ကြာဖြတ်ပြည်သူခေါင်းဆောင်အဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြောက်ရခြင်းအ ကြောင်းသည်အီဂျစ်စစ်တပ်အကြီးအကဲတစ်ချို.ကမူဘာရက်ကိုဖြုတ်ချခဲ့ရင်တိုင်းပြည်ကိုယာယီအားဖြင့်ဘယ်သူဘယ်ဝါခေါင်းဆောင်မလဲဆိုသည့် မေးခွန်းထုတ်ပြောလာသည်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အနေနဲ.ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကရွေးချယ်ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်၊
အီဂျစ်စစ်တပ်အနေနဲ. ဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းနိုင်ဖို.အာဏာရှင်မူဘာရက်ကညမထွက်ရအမိန်.ထုတ်ပြည်ထားသော်လည်းလိုက်နာဖို.လက်နှေးနဲ.နေပြီးစစ်တပ်အင်း အားလှုပ်ရှားပြသခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ.နှိမ်နှင်းတဲ့အရိပ်အရောင်မတွေ.သေးပါဘူး၊အီဂျစ်စစ်တပ်၏လက်နှေးကွေးလုပ်ဆောင်ချက်အပေါ်အားမရတဲ့အာ ဏာရှင်မူဘာရက်ကသူ.အပေါ်သစ္စာခံတဲ့လူထောင်ဂဏန်းလောက်ကိုလက်နက်တပ်ဆင်ပေးပြီးဆန္ဒပြပြည်သူတွေကိုနှိမ်နှင်းဖို.ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီး အားအမိန်.ပေးထားပါသည်၊ဒီနေ.နေ.လည်ပိုင်းမှာပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနကနေဆန္ဒပြပြည်သူများလူအုပ်ရာနေရာဖြစ်တဲ့ထရီးစတုရန်းအထဲသို.ကား နှစ်စီးဖြင့်ဝင်တိုးဖို.ကြိုးစားရာမှာစစ်တပ်ရင်းမှူးတစ်ဦးကသူ.သံချပ်ကားကိုဖြန်.လိုက်ပြီးတားဆီးခဲ့သည်၊ပြီးတော့၊တပ်ရင်းမှူးကပြည်သူတွေကိုမိန်. ခွန်းပြောကြားရာမှာ “ပြည်သူတွေနဲ.အတူရပ်တည်မယ်“လို.ပြောကြားခဲ့ပြီးပြည်သူတွေကလည်းသူ.ပါးနှစ်ဖက်ကိုချစ်ခင်စွာနမ်းပေးကြပြီးလက်ခုတ် တီးကြပါသည်၊ပြည်သူတစ်ချို.ကလည်း “ပြည်သူနဲ.စစ်တပ်တစ်သားတည်ဖြစ်နေပြီ“လို.အော်ဟစ်ကြပါသည်၊
စစ်တပ်ကသာလျှင်အာဏာရှင်မူဘာရက်ကိုဖြုတ်ချနိုင်မည်လို.ယုံကြည်နေကြပါသည်၊သို.သော်ငြားလည်း၊စစ်တပ်အနေနဲ.ဘက်ရွေးဖို.မလုပ်ရသေးပါ ဘူး၊အာဏာရှင်မူဘာရက်ကလည်းအာဏာဆက်လက်ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်သို.မဟုတ်သူ.အတွက်လုံခြုံရန်အတွက်ပြင်ဆင်တဲ့အနေနဲ.ထောက်လှမ်းရေးအ ကြီးအကဲဖြစ်တဲ့အိုမာ ဆူလဲမန်းကိုဒုသမ္မတအဖြစ်ခန်.အပ်ခဲ့ပါသည်၊အိုမာဆူလဲမန်းကိုနိုင်ငံတော်အာဏာအမွေးဆက်ခံသူဖြစ်လာဖို.အလာအလာများနေပြီးအာဏာလွှဲ ပြောင်းသည့်နည်းတစ်နည်းဖြစ်သည်ကိုသတိပြုနေကြပါသည်၊စစ်အရာရှိဟောင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့မူဘာရက်ဟာနှစ်ပေါင်း(၃၀)နီးပါးကြာအောင်စစ် တပ်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးအခုကျမှစစ်တပ်ကပြည်သူဘက်ကိုရပ်တည်ပြီးတိုက်ပွဲဝင်ပါ့မလားဆိုသည်ကိုပြည်သူများကသတိနဲ.စောင့်ကြည့်နေကြပါသည်၊
တနင်္ဂနွေနေ.တွင်ဆန္ဒပြပြည်သူများကပို.စကာကိုင်ဆောင်ပြီး “စစ်တပ်အနေနဲ.အီဂျစ်ပြည်သူလူထုနှင့်မူဘာရက်အကြားဘက်ရွေးရမည်“လို.စာတမ်း ထိုးရေးသားထားပါသည်၊အီဂျစ်နိုင်ငံတွင်ဥပဒေစိုးမိုးမှုစက်ယန္တရားလုံးဝဖရိုဖရဲဖြစ်သွားပြီးဆန္ဒပြပြည်သူများကမိမိရပ်ရွာဒေသကိုမိမိစောင့်ရှောက်နေ ရတဲ့အခြေနေရှိနေပါသည်၊ဆန္ဒပြပြည်သူများတစ်ရာနီးပါးအသက်သေဆုံးရှုံးပြီးနောက်ပိုင်းအီဂျစ်စစ်တပ်ကပြည်သူဘက်ရပ်တည်မလား?မူဘာရက် အောက်ကျွန်းခံမလား?ဆိုတဲ့တောင်းဆိုချက်ဆူညံသံများပေါ်ထွက်လာခြင်းဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုက်ရပါသည်။
သတင်း သတင်း။ News, အမြင်များ
တိုက်ပွဲအတွင်း နအဖတပ်မှ ကလေးစစ်သား အများစု သေဆုံးခ...
၄၈ နှစ်မြောက် တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားတော်လှန်ရေးနေ...
မြန်မာ့ စစ်ဘောင်က ကျယ်သထက်ကျယ်
နအဖစစ်တပ် ရိက္ခာအခက်အခဲကြောင့် လူထုဆန်ကို တောင်းစား...